Kubermatic, yaimbove Loodse, inovhura iyo sosi kodhi yayo yepamoyo tekinoroji | Linux Vakapindwa muropa
Kubermatic, yaimbove Loodse, inovhura iyo sosi kodhi yeiyo yepamoyo tekinoroji
Loodse GmbH, kutanga kweKubernetes nebasa rakakosha munzvimbo yakavhurika sosi yezvinhu zvipenyu, akachinja zita rayo kuti Kubermatic uye akaburitsa vhezheni itsva yako otomatiki chikuva zvigadzirwa pasi peyakavhurwa sosi rezinesi.
Kune avo vachiri kusaziva Kubernetes, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi ndiyo sisitimu yekugadzirisa software masumbu emidziyo mubhizinesi kuitira kuti maapplication amhanye munzvimbo dzakasiyana dzemakomputa.
Yakaburitswa neGoogle muna2014 seyakavhurwa sosi chirongwa kune iyo Germany-based Kubermatic, iyo yakavambwa muna 2016, ndeimwe yeakanyanya kupa. Inoti ndeimwe ye "epamusoro mashanu emakambani kuzvipira" pamwe neVMware Inc., Microsoft Corp., IBM Corp.'s Red Hat neGoogle pachayo.
Iyo Kubermatic chikuva Iyo yekambani inomiririra Kubernetes kubva nhasi mangwanani inowanikwa pasi pemahara Apache 2.0 rezinesi.
Iyo software inopa manejimendi manejimendi yakabatana kubata masumbu eKubernetes paAmazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, uye pane-nzvimbo zvivakwa. Inoshandiswa nemakambani akaita saDaimler AG, ISPs nevamwe kuti izvo zvirevo zvekutanga zveGerman zvinoona kudzikiswa kunosvika 72% mu "mari yekushandisa inosanganisirwa neKubernetes zvivakwa."
“Zvino zvatava pachena Kubermatic, tinofungawo kuti vanhu vanofanirwa kunzwisisa chiono chedu uye kuti DNA yedu chii. "Kubernetes automation inobatsira vatengi vedu kunyatso chengetedza mari pamaKubernetes mashandiro nekumhanyisa yakawanda sezvinobvira padanho rekushanda, saka vashandisi vedu vanogona kunyatso tarisa pakuvaka matsva ekushandisa."
Iyo Kubermatic Kubernetes chikuva zvinotora maminetsi mashoma kuti uise pane zvigadzirwa zvekambani. Kana zvese zvinhu zvangoiswa, maneja anogona kutanga kushandisa software kukwirisa sango ravo zvichibva pakuda kwekushandisa, kugadzira masumbu matsva, uye nekugadzirisa kudzivirirwa kwedata.
Iyo Open Source chikuva Kubermatic Kubernetes inopa:
HA Kubernetes kuzviporesa paKubernetes CRD-yakavakirwa Kubernetes zvivakwa uye vanoshanda kune akareruka manejimendi
Automated lifecycle manejimendi ine yakasanganiswa sumbu yekupa, kuyera, kumutsiridza, uye kuchenesa neimwe chete API kufona
Multi-mushandisi uye mushandisi manejimendi ine mamiriro akafanogadzirirwa ezvikamu zvakasiyana zvesangano
Kuzivikanwa uye SSH kiyi manejimendi
Cluster Models, Presets, uye Mapulagi eKutonga uye Kumisikidza Kwemitemo
Automated multi-cluster uye yakawanda-gore backup backup inobata nenzvimbo dzekuchengetedza dzekugadzirisa
Kunyoresa zvivakwa uye kuongorora pamwe neyakavakirwa-mukati Prometheus neGrafana
Central yekuzvishandira portal kupfuura akawanda masumbu, akawanda makore, uye akawanda matunhu kuunza Kubernetes-se-a-Service kushambadzira nekukurumidza
Sarudzo yemahara yezvivakwa zvezvivakwa nerutsigiro rwekuzvarwa kubva kune ese makuru makuru evanopa gore kusanganisira AWS, Google Cloud Platform, uye Microsoft Azure, pamwe neOpenStack uye VMware vSphere nharaunda.
Centralized manejimendi emidziyo ine makemikari uye akaomeswa pamwe neyekuzvarwa KubeVirt kusangana
Containerized mushandisi sango rekudzora ndege ine autoscaling yezvinhu zvinodzora ndege
Nzvimbo yacho ine yepamusoro nzira yekuwanika iyo inogonesa nzvimbo dzeKubernetes kuti dzigadzikane kubva pakubuda otomatiki.
Kune makambani anomhanyisa makuru deployments ane akawanda mativi ekugadzirisa, chikuva chinopa otomatiki kugona kuita mamwe mabasa ekuchengetedza
Vatariri vanogona kugadzira marongero kuona kuti yako Kubernetes kumisikidzwa inosangana nezvinodiwa zvemukati zvekuchengetedza. Vashandisi vanoda zvemberi zvekuchengetedza maficha vanogona zvakare kubatanidza chikuva kune ekunze maturusi senge Anoshanda Dhairekitori, Microsoft inonyanyo shandiswa kuzivikanwa manejimendi chikuva.
Kubermatic inotaura kuti kuita kuti software iwanikwe nekuipa iyo yemahara kunobatsira kugadzirisa kudiwa kuri kukura mumusika.
"Mushure memakore gumi epakati pegore komputa, iyo indasitiri iri kutanga kweinotevera decentralized komputa kutenderera, izvozvi yave kumucheto," akadaro CEO Sebastian Scheele. "Edge ichabudirira chete nezvizere zvivakwa uye application automation."
Kuwedzera iyo itsva otomatiki mhinduro kune yakavhurwa sosi maturusi ecosystem yakatenderedza Kubernetes inozopedzisira yasimbisa iyo bhizinesi kukwezva kweiyo fomati pachayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kubermatic, yaimbove Loodse, inovhura iyo sosi kodhi yeiyo yepamoyo tekinoroji
WSL yatove kuratidza kunyorera neGUI uye zvave nyore kuisa
Google Chrome inomutsidzira chirongwa ichi kuviga ma URL mubrowser